बाढी, पहिरो र डुबानमा परी हालसम्म ५० को मृत्यु कहाँ के भयो ? - NewsCenterNepal.com
बाढी, पहिरो र डुबानमा परी हालसम्म ५० को मृत्यु कहाँ के भयो ?
२०७६, २९ असार आईतवारमा प्रकाशित
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी आइतबार दिउँसोसम्म ५० को मृत्यु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएकाे छ ।
प्रहरीका अनुसार बाढी पहिरोमा परी काठमाडौंमा ३, ललितपुरमा र भोजपुरमा ५/५, ओखलढुंगामा ४, मकवानपुर, खोटाङ, काभ्रे र सिन्धुलीमा ३/३, धादिङ, झापा, बारा, धनुषा र डोल्पामा २/२ ईलाम, उदयपुर, सुनसरी, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा, रामेछाप, चितवन, पाल्पा र दाङमा १/१ गरी ५० को निधन भएको हो । निधन हुनेमध्ये २२ महिला २८ पुरुष रहेका छन् ।
बाढी पीडितको विद्यालयमा बास